Wasiir Fiqi: Galmudug Janno ma taalo ee halaagiinaa yaala | Dhacdo
Wasiirka Amniga Galmudug, Axmed Macalin Fiqi oo shir jaraa’id ku qabtay deegaanka Bacaadweyne ee Gobolka Mudug ayaa sheegay in ay u diyaargaroobeen difaaca deegaanka Bacaadweyne iyo deegaanada kale ee Galmudug.
“Waxaan runtii u mahadcelineynaa oo u hambalyeyneynaa reer Bacaadweyne oo noqday qalcadii halganka, geesinimada iyo naf hurnimada.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa yiri “Waxaan rabnaa dadka ku dhaqan deegaanada ku xeeran Bacaadweyne inay la yimaadaan geesinimada reer Bacaadweyne oo kale. Inay sida reer Bacaadweyne isugu tashadeen, isaga difaacayaan ayna uga baqeynin, welibana ku jebinaya mar kasta, goob kastoo leeskaga horyimaado in dadkoo dhan ay sidaasi u dhiiradaan.”